Wednesday October 30, 2019 - 19:25:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo katirsan dowladda Federaalka ayaa markale dhagxaan ku gooyay qaar kamid ah waddooyinka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho.
Xalay saqdii dhexe ayaa inta badan waddooyinka jidcadayaasha xaafadaha ku teedsan wadada Sodonka lasoo dhigay dhagxaan waaweyn oo ah kuwa caanka ah magaalada Muqdisho.
Saaka markii uu waagu baryay ayay dadka deegaanka oo isxilqaamay waxay bilaabeen in ay iska qaadaan dhagxaanta lagu jaray waddooyinka yaryar oo ah meesha kaliya ee hadda ay bulshadu ku dhaq dhaqaaqdo.
Waxgaradka iyo ganacsatada ayaa isku ballansaday in ay ka dhiidhin doonaan xirnaashiyaha waddooyinka xaafadaha iyagoo dowladda Federaalka ku eedeeyay in ay cunaqabateyn ku hayso ganacsiga iyo dhaq dhaqaaqyada bulshada.
Wasaaradda ammaanka DF-ka ayaa horay dhagxaan ugu xirtay dhammaan waddooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah iyadoo ku marmarsiyoonaysa in ay ku sugayso amniga xarumaha dowladda oo badanaa weeraro kala kulma Al Shabaab.